Waxyaabaha Layaabka Leh Ee Ku Qarsoon Hurdada Uu Seexdo Maroodigu Iyo Sida Aanay Dadku Uga Warqabin. – Xeernews24
Waxyaabaha Layaabka Leh Ee Ku Qarsoon Hurdada Uu Seexdo Maroodigu Iyo Sida Aanay Dadku Uga Warqabin.
5. Oktober 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Maroodiga qaaradda Afrika wuxuu seexdaa saacado aad u kooban, marka loo eego xayawaanada kale ee duur joogta ah, sida lagu xusay cilmi baadhis cusub oo dhawaan la soo gabogabeeyey. Seynisyahanno ayaa baadhitaanka ku sameeyay laba maroodi oo ku nool waddanka Botswana, si ay wax badan uga ogaadaan sida dabiiciga ah ee maroodiga uu u hurdo. Maroodiga wuxuu seexdaa afar illaa lix saacadood, balse sida dabiiciga ah wuxuu hurdaa laba saacadood habeen kastaa, sida lagu ogaaday baadhitaankaasi. Maroodigu mararka qaar wuxuu soo jeedaa dhowr maalmood. Xilliyada aanay seexan waxay socdaan masaafo aad u dheer, waxaana suuragal ah inay ka qaxayaan ugaadhsatada ama libaaxa.
Prof Paul oo ah maamulaha jaamacadda Witwatersrand ee Koonfur Afrika, wuxuu sheegay in hurdada noocaas ah ay maroodiga u tahay arrin u gaar ah. “Maroodigu waa xayawaanka ugu hurdada yar. Taasina waxay u muuqataa inay sabab u tahay jidhkooda oo aad u weyn”, ayuu u sheegay BBC-da. “Waxaan ogaanay in maroodigu uu riyoodo seddax ama afar maalin kasta ka dib. Taas waxay siineysaa maskax aad u xasuus wanaagsan oo lagu magacaabo Aragtida su’aalaha oo la falgasha xusuusta seexashada iyo xoojinta xusuusashada.”
Sidoo kale maroodiga lagu hayo meelaha gaarka ah ayaa si weyn loo baadhay. Si ay wax badan uga ogaadaan midka ku nool keymaha waaweyn, Cilmi baadhaha iyo kooxdiisu waxay ku xidheen maroodiga qalab ay kula socon karaan hurdadiisa. Qalabkaasi waxaa la geliyay foolasha maroodiga gudaheeda. Sheyga lagu xiray waxaa uu duubay xilliga maroodigu uu hurdo, Sidoo kale waxaa la baadhay qaabka ay u seexdaan ama sida dhinaca dhulka uu u dhigo.
Labada maroodi ee baadhitaanka ugu weyn lagu sameeyay waxaa la daba socday shan usbuuc, waxaana laga helay fikrado cusub oo la xidhiidha hurdadooda.
Sida guud, xayawaanada yaryar way ka hurdo badan yihiin kuwa waaweyn. Tusaale ahaan, xayawaanka ugu dhaqaaqa yar wuxuu hurdaa 14 saacadood, halka aadanaha uu hurdo 8 saacadood. Sida maroodiga uu ku badbaado isagoo hurda laba saacadood oo keli ah weli lama ogaan, sida seynisyahannadu sheegeen. Cilmi baadhayaashu waxay sheegayaan in hadda ay baadhi doonaan maroodi badan oo labku uu ka mid yahay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/10/dormir.jpg 235 460 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-05 17:29:542018-10-05 17:29:54Waxyaabaha Layaabka Leh Ee Ku Qarsoon Hurdada Uu Seexdo Maroodigu Iyo Sida Aanay Dadku Uga Warqabin.
Trump oo si xun u bah-dilay boqorka dalka Sacuudiga. Saraakiil ay tababareen Milatariga Turkiga oo maanta la dhaariyay (Daawo Sa...